သက်ဝေ: ရစ်ခြင်း၏ အနုပညာ
Vista August 12, 2010 at 5:08 PM
ဟိဟိ။ ကြောက်ဝူးကွ ။
:P August 12, 2010 at 5:14 PM
ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာလို့ဖတ်ပြီး လာဖတ်တာ....
လန့်ထှာ.... မဟာဗန်ဓုလ(သတ်ပုံသည်းခံပါ) နဲ့ ဘာတော်သလဲ...ငှင်
ညီမလေး August 12, 2010 at 5:47 PM
အဲ့ဟာ တခါတခါကျ လိုအပ်တယ်ရယ်း)
ဖြူ August 12, 2010 at 5:50 PM
ဟား ဟား ဟား... သက်ဝေရယ်...
ရီစရာ ကောင်းအောင် ရေးတတ်တယ်
သိပ်မရီရဲဘူး တော်ကြာ လာရစ်နေမှဖြင့်...
T T Sweet August 12, 2010 at 6:00 PM
ဒီကလဲ အရစ်ခံချင်လို့လားမသိ ... ပို့စ်ရေးတာတောင် အောက်နားမှာ သွားစထားသေးတယ်။ အမြန်ပြန်ဖျက်မှပဲ ...
ဒီကလဲ မျက်လုံးက နဲနဲဝါးနေတော့ ချစ်ခြင်း၏ အနုပညာ လို့ဖတ်ပြီး တို့သယ်ရင်းတွေကတော့ အချစ်သမားတွေပါလားကွဆို ဒီက အစားသမားကတွေးနေတာ။ ဟိုနေ့ကပဲ တန်ခူးတင်ထားတာ အချစ်အကြောင်းလေ။
Thant August 12, 2010 at 6:14 PM
ဟားဟား......တူနှစ်ချောင်းကိုတောင် ရစ်လို့ရအောင်ရစ်လိုက်သေးတယ်.....နဲတဲ့အရည်အချင်းမဟုတ်ပါလား...... :D
မေဓာဝီ August 12, 2010 at 6:41 PM
အမသက်ဝေ ဗိုင်းငင်ပါလား။ ဗိုင်းငင်ရင် ချည်ခင်တွေ ရစ်ရတယ် မဟုတ်လား။
ရာကိုချစ်လို့ ရစ်ကိုခြာ၊ မာမလောင်လို့ မောင်မလာ ဆိုတာ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတယ်။
ဂျင်ကြိုးက အရစ်တိုတယ်။ ချည်ခင်တွေဆို အများကြီး ရစ်ရတာ။ မဆုံးမချင်း အမုန်းသာရစ်ပေတော့လေ။ :P
ZT August 12, 2010 at 6:43 PM
မူလီတော့ အတူတူပဲ။ ဘယ်ဖက်ရစ်တာနဲ့ ညာဖက်ရစ်တာပဲ ကွာတယ် ဆိုတဲ့ စကား သွားသတိရတယ်။ :P
Ko Paw August 12, 2010 at 7:02 PM
ဟားဟား....ဒီပို့စ်ကို မောင်ရစ်တို့ မိုးမခကို ပို့သင့်တယ်။
ရစ်တာတော့ ကျနော်နဲ့ တော်တော်တူတယ်။ ဒါကြောင့် မဒမ်ပေါက ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းကို အထူးအားပေးတာ။ ဝါသနာကို မြေတောင်မြှောက်တယ်မထင်ပါနဲ့။ ဘလော့ဂ်မရေးဘဲ အားနေရင် အနားမှာရှိတဲ့ သူ့ကိုပဲ ပတ်ပြီး ရစ်နေတတ်လို့။း-)
သက်ဝေ August 12, 2010 at 8:59 PM
ဗစ်... ချစ်၍ ရစ်သည် တဲ့...
စင်စင်... ရစ်ချင်နေတာနော်... စာလုံးပေါင်းကို ရစ်လိုက်ရမလား... ငှင်...
ညီမလေး နဲ့ သန့်... တတ်သည့်ပညာ မနေသာပေါ့... ဟဲဟဲ
ဖြူ... တိုးတိုးရယ်ပါ... ရစ်မှာနော်...း))
ဆွိ... အချစ်အကြောင်း မတွေး... အရစ်အကြောင်းသာ ရေးသည် တဲ့...
မေ... ဗိုင်းနဲ့ ချည်ခင်တွေ ဝယ်ပေးပါလို့ ရစ်လိုက်ရမှာလား... ပြောပါ...း))
ကိုဇက်တီ... ဟိုနေ့က တွေ့လိုက်တယ်နော်... (ဟမ်)
ကိုပေါ... တိုးတိုးလုပ်ပါ... မောင်ရစ်ကြားရင် ခက်ကုန်လိမ့်မယ်... အိမ်မှာလဲ အတူတူပဲ... နားအေးရင် ပြီးရော... မရစ်ရင် ပြီးရော... ရေးချင်ရာရေးခွင့် ပေးထားတာ...း))
ရစ်ခြင်း၏ အနုပညာကို အားပေးသွားကြသူများ ကျေးဇူးပါဗျို့...
အပြုံးပန်း August 12, 2010 at 9:28 PM
ချစ်ကြည်အေး August 12, 2010 at 9:42 PM
တခွန်းထဲပဲ ပြောလိုက်စမ်းဘာ.... ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ....ဟင်း ပြန်ရစ်လိုက်လို့ .... နာလန်ထမို့ အလျှော့ပေးလိုက်တယ် မှတ်ပါ....ဒါဗြဲ....
ပုံ / မယ်ရစ်ကြည်
သက်ဝေ August 12, 2010 at 9:52 PM
ဟိုမှာ ကိုယ်တို့ထက်ဆိုးမယ့် မယ်ရစ်ကြည် လာနေပြီ... သူက မနေ့ တနေ့ကပဲ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ လို့ ပေါ်တင် မေးထားတာ...
မမ ရစ်ကြည်ရေ... တကယ် ကြောက်ပါတယ်... အမိုက်အမဲလေးမို့ ဗွေမယူပါနဲ့နော်... အဟိ...
Z August 12, 2010 at 10:53 PM
မမသက်ဝေက ကြောက်စရာကြီးပါလား အရစ်ကြီးပေါ့
ရေးတဲ့ အိုင်ဒီယာကိုတော့ ကြိုက်တယ်ဗျို.
ကလူသစ် August 12, 2010 at 11:27 PM
အော် ကံဆိုးသူမောင်ရှင်။ ရစ်သမျှခံပေါ့။
TURN-ON-IDEAS August 12, 2010 at 11:31 PM
လင်းဒီပ August 12, 2010 at 11:39 PM
လစ်မှ လစ်မှ တော်ကြာ ရစ်နေဦးမယ် :P
P.Ti August 12, 2010 at 11:57 PM
အမသက်ဝေ ဆိုးဆိုးစိန် ရစ်ရစ်စိန်
မောင်မျိုး August 13, 2010 at 11:47 AM
ဒါဆို အစ်မက အဖြူသည်ကြီးရစ်တာပေါ့း)
Hmoo August 13, 2010 at 12:16 PM
Kyan Yit :)
ခွန်မြလှိုင် August 13, 2010 at 3:09 PM
သြော်... ဗနုလမယ် စိန်ရစ်ရစ် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ မှတ်တယ်... ရဲရဲကြီး ရစ်ရဲတာ နည်းတာမှတ်လို့... အဟိ ထပ်ဆင့်ရစ်သွားသည်....
Y August 13, 2010 at 3:16 PM
သက်ဝေ... မြန်မြန်နေကောင်း၍ များများရစ်နိုင်စေကြောင်း ဆုတောင်းသည်...
Anonymous August 13, 2010 at 5:55 PM
ခခ သင်ပေးလို့ ။
အရစ်လည်း ခံဖူးတယ် ။
ဇွန်မိုးစက် August 15, 2010 at 11:18 AM
ဇွန်က ခုတလော ဖဘနဲ့ဘလော့ထဲ သိပ်မ၀င်ဖြစ်လို့ အရစ်မခံလိုက်ရတာထင်တယ်နော်... ဟိ။
ညကပဲ အတူနေသူငယ်ချင်းကို ရစ်ထားတယ်။ :D
tg.nwai August 28, 2010 at 2:27 AM
အင်း..ကျောက်ကျောက်လန့်လန့် ဖတ်သွားကျောင်းပါ...(ရစ်မှာကျောက်လို့ ရရစ်ရှောင်ရေးသွားပါသည်...ကျည့်ကျက်ဖတ်ရှုပါရန်..) :)